Ụbọchị My Pet » Ndenye ọgwụ Anu ulo
site Therese Kopiwoda
emelitere ikpeazụ: Ka. 26 2020 | 3 min agụ
N'ihi na ihe fọrọ nke nta ka afọ ise Anna Nwa Atụrụ, 36, agbalịwo na ịda mbà n'obi. Ọ chọọ enyemaka si dọkịta, iwere dị iche iche ọgwụ na n'elu counter ọgwụ, vitamin, na otu n'usoro nke eke ịgba akwụkwọ nile ná mgbalị ịchịkwa ya. Gịnị Ikekwe, a kasị welcome na irè ngwọta Iguzogide ya ịda mbà n'obi, Otú ọ dị, bịara ya site ohere n'ụdị a na-eleghara anya, asaa afọ ókè collie aha ya bụ Mike. A enyi ya ndị nọ n'ọrụ n'ime a ókè collie nnapụta ìgwè ike Anna-ewetara Mike n'ụlọ na-elekọta ya. “Ọ bụ ike ibi naanị,” ọ na-akọwa, “ike na-abịa n'ụlọ mgbe ụfọdụ. Naanị ihe ihu m e nhicha, telivishọn, kọmputa, ekwentị; ọ bụla ọzọ dị ndụ ahụ. Mike agbanweela na. Itís mma na-abịa n'ụlọ na-enwe ya na-eche m. Otu n'ime ụmụ klas m ọbụna gwara m a
obere oge mgbe m nwetara Mike na m ọchịchọ gbanwere. M yiri obi ụtọ.”
Ndị nchọpụta na-arụ ọrụ na-ekpebi ma ma ọ bụ na e nwere ihe ọ bụla nti ike na-egosi na-akwado ihe Pita nwe dị ka Anna ndidi sị na niile tinyere, na anu ulo na-eme ezi ihe dị iche na ndụ ha. Na-adịbeghị anya ọmụmụ e mere na iche iche nke ndị dị otú ahụ dị ka ndị na-ebi naanị, ndị agadi, na ọbụna lụrụ di na nwunye na-ahụ ihe ike uru, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla, na-enweta site na owning a Pita. Ndị a ọmụmụ gụnyere na-achọ na-ahụ dị ka nke ọma dị ka uche akụkụ nke Pita nwe.
Karen Allen, Research Scientist si Department of Medicine, State University nke New York na Buffalo, specializes na nnyocha ọ na-n'ahụ mmetụta anu ulo nwere na ụmụ mmadụ. Otu n'ime ya ọmụmụ aka 48 stockbrokers, niile nke onye a na-emeso ya na Ace inhibitors, ọgwụ maka ọbara mgbali elu. Ha niile biri nanị na bụghị ekesịpde anu ulo maka dịkarịa ala afọ ise tupu ọmụmụ. Allen họọrọ ndị nwere ihe na ọchịchọ na-elekọta a Pita. 'Na m chọrọ ijide n'aka na ndị a bụ nnọọ ọrụ ndị,’ ọ na-ekwu. Ọ na-ejide n'aka na nke ọ bụla n'ime ha ga-achọ a Pita n'ime ndụ ha ma ọ bụrụ na ha na-ahọrọ ịbụ akụkụ nke otu ìgwè na e kenyere anu ulo. Mgbe ọmụmụ malitere, ọkara nke sonyere na họrọ aghara na jụrụ iji nweta ha na-ahọrọ nke a na nkịta ma ọ bụ a cat. Ná ngwụsị nke ọnwa isii, mgbe ha bụ ndị niile na-anata Ace inhibitors, ndị na Pita-owning otu nọgidere budata ọzọ anụ asịkarị karịa ndị na-enweghị anu ulo. Ha gosiri na-erughị nke mmụba nke ọbara mgbali na obi udu karịa ndị na-abụghị Pita-nwe ìgwè. Mgbe ọmụmụ e dechara, na sonyere gwara nke results, Allen na-ekwu,, 'Ha nọ na-ụmụ anụmanụ, na eziokwu, dịkarịa ala, ọkara nke ndị mmadụ [na ọmụmụ] onye nwetara ọgwụ wee si wee anu ulo.’
“Onye na-akpali Inweta na anyị iyi na ya chọpụtara,” Allen na-ekwu, “bụ na ndị mmadụ bụ ndị nwere fewest na-elekọta mmadụ na kọntaktị iyi na-erite uru kasị. Anyị na-eche na ọ bụ n'ihi anu ulo-eji dochie anya ihe ụfọdụ na-elekọta mmadụ support.” Ihe mbụ nnyocha ọ aka agadi nwanyi, bụ onye biri nanị, na a Pita. Ọ hụrụ na ha na-arụ ọrụ karị na-enwe ala ọbara mgbali karịa ndị ọzọ na agadi inyom bi nanị na-enweghị anu ulo. N'ihi na anu ulo achọ anya na ihe omumu, ezi mgbe a na-eme ndị nwe ha karị karịa ndị ogbo ha na-adịghị enwe anu ulo. Ọzọkwa, a ubara ọrụ sụgharịta n'ime ike uru ndị dị otú ahụ dị ka obere ịda mbà n'obi na nchegbu, na ụba na-elekọta mmadụ omume, nke naanị e nwapụtaworo na-aba uru anyị ike.
Ya mere, i kwesịrị ọsọ gaa ndo na ịmụta Fido mma gị na ahụ ike? Nke ahụ niile na-adabere. Dị ka Allen, ndị mmadụ na-erite uru ọtụtụ ihe na-enwe anu ulo bụ ndị na-ele anụ dị ka a kpọrọ ihe òtù ezinụlọ nke. Ị pụrụ icheta Anna ezie, onye hụrụ enyi kasị mma na pseudo therapist ya nkịta, Mike. “Ọ bụ ya bụ zukwa,” Anna kwuru, sị. “Mikie ese m ya nnukwu anya agba aja aja na-amanye m ka m bilie mgbe m dara mbà n'obi. Ọ bụ ike mgbe ọ na-arịọ m ka m iji zọpụta ndụ ya ka ya n'èzí kama ọ na-yiri ka na-eche banyere otú m na-eche. Ugbu a, m nwere onye na-ịzụlite.” Ma nke bụ eziokwu bụ, Anna na Mike abụọ nwere onye inwewe.